Canon Lens Production Videos | My Burmese Blog
Canon Lens Production Videos	On April 26, 2011	by Htoo Tay Zar	With	3 Comments	- Knowledge, technology, Video	မနေ့က Canon DSLR Camera Lens တွေ​ထုတ်​တဲ့ အကြောင်း​ရိုက်​ထား​တဲ့ ဗီ​ဒီ​ယို ယူ​ကျူ့​မှာ ကြည့်​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ အခု​ကတော့ ဘ​လော့ဂ်​မှာ ပြန်​တင်​ပြီး စု​ထား​လိုက်​တာ​ပါ။ မှန်​လုပ်​သွား​တာ​အရင်​က မ​မြင်​ဖူး​တော့ စိတ်ဝင်စား​ဖို့ ကောင်း​ပါ​တယ်။ အပူ​ပေး​ပြီး ပုံ​သွင်း⁠သွင်း​သွား​တာ စိတ်ဝင်စား​ဖို့ ကောင်း​ပါ​တယ်။ ထင်​မ​ထား​ဘူး ကင်​မ​ရာ​မှန်ဘီလူး​ကို စက်​နဲ့​လုပ်​တယ်​ထင်​နေ​တာ လူ​နဲ့ ဆင်​သွား​တာ​တွေ့​ရ​တယ်။
ဗီ​ဒီ​ယို​ထဲ​မှာ 500 mm Lens ဆင်​ပြ​သွား​ပါ​တယ် နောက် lens correction လုပ်​တာ​တွေ တွေ့​ပါ​တယ်။ Canon ဟာ ကင်​မ​ရာ ဘော်​ဒီ​တွေ​ကို ဂျပန်​မှာ လုပ်​တာ​များ​ပါ​တယ်။ lens ကတော့ L lens လောက်​သာ အဲ​ဒီ​မှာ လုပ်​ပါ​တယ်။ Fukushima မှာ စက်​ရုံ​ရှိ​ထား​ပြီး ဆူ​နာ​မီ​နဲ့ တော်တော်​ပျက်စီး​သွား​တယ်​လို့ သ​တင်း​ထဲ တွေ့​မိ​တယ်။ ပုံ​မှန် lens တွေ​ကို​တော့ ထိုင်​ဝမ် နဲ့ မလေးရှား​မှာ ထုတ်​လေ့​ရှိ​ပါ​တယ်။ မသိသေးသူ​များ အတွက် ပြော​ပြ​ချင်​တာ​ကတော့ ပုံ​မှန် lens series တစ်​ချို့​နဲ့ point and shoot compact camera တစ်​ချို့ အတွက် lens မှန်​သတ်သတ်​ကြီး​ပဲ​ကို မြန်မာ နိုင်ငံ​မှာ ထုတ်​တယ်​ဆို​တာ​ပါ​ပဲ။ အစိုးရ​ပိုင် စက်​မှု့ ၁ ပု​သိမ်​မှန်​စက်​ရုံ​က​ထုတ်​တာ​တော့ မဟုတ်​ပါ​ဘူး။ Asia Optical ဆို​တဲ့ taiwan based company ရဲ့ မြန်မာ​နိုင်ငံ​က စက်​ရုံ​မှာ ထုတ်​တာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ဒီ​စက်​ရုံ​က​နေ Canon, Nikon, Sony နဲ့ အခြား မှန်​နဲ့ ပက်​သတ်​တဲ့ နာ​မည်ကျော် ကု​မဏ္ဏီ​တွေ အတွက် ထုတ်ပေး​နေ​တာ ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ဒီ​စက်​ရုံ​ဟာ အနောက်​နိုင်ငံ​တွေ​ရဲ့ sanction ကိုကျော်​ပြီး မြန်မာ​နိုင်ငံ​မှာ စက်​ရုံ​လာ​ဆောက်​တဲ့ အတွက် black list ထိ​ထား​တယ်​လို့ သိ​ရ​တယ်။
Nikon ကင်​မ​ရာ​တွေ​အတွက်​လဲ အဲ​ဒီ​စက်​ရုံ​က မှန်​တွေ​ထုတ်ပေး​နေ​တာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ Nikon အများ​စု​ကတော့ ဘော်​ဒီ​ကို ထိုင်း​မှာ ထုတ်​ပါ​တယ်။ Nikon, Nikkor ရဲ့ Nano coating နည်း​ပညာ​က​လဲ နာမည်ကြီး​ပါ​တယ်။ အခု​ကတော့ Canon lens တပ်​ဆင်​တဲ့ အကြောင်းပါ။ စိတ်​ထဲ​ရှိ​တာ​ပြော​ရ​ရင် ဗီ​ဒီ​ယို အပိုင်း ၃ မှာ လူ​နဲ့ တပ်​တာ​မြင်​ရ​တော့ နဲ​နဲ စိတ်​ဓာတ်​ကျ​သွား​တယ်.. human error က auto-machine error ထက်​ပို​များ​မယ်​လို့ စိတ်​ထင်​စွဲ​နေ​လို့ ဖြစ်​မယ်​ထင်​တယ်။ နောက်​တော့ သူ​တို့ lens တွေ သေချာ test လုပ်​တာ​တွေ့​ရ​တော့​မှ စိတ်သက်သာ​ရ⁠ရ​သွား​တယ်။ အမှန်​တော့ ကြောင်​တာ​ပါ မ​ဝယ်​နိုင်​မယ့် lens ကို​သွား စိတ်ပူ​နေ​တာ… အို​ကေ lens ထုတ်​ပုံ အဆင့်​ဆင့့်​ကို ဗီ​ဒီ​ယို​မှာ ရှု့​စား​ကြ​ပါ​ဦး…
စကားမ​စပ် – နောက် ၁​၀ ရက်​လောက် အထိ ကွ​ျန်တော် တရား​စခန်း​မှာ ရှိ​နေ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ကြို​ရေးထား​ခဲ့​လို့ ပို့စ်​တွေ​ကတော့ အလို​လျောက် အသစ်​တွေ​တက်​နေ​ပါ​လိမ့်​မယ်။
Camera, Canon, DSLR	3 Comments	exiter
သာဓု သာဓု … တရားစခန်းအတွက်ကြိုခေါ်ပေးထားတာ … Like or Dislike:00	MrDBA
တရားစခန်းမှာ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်မနေနဲ့ဦးနော်။
Well-loved. Like or Dislike:20	Htoo Tay Zar
မ​ရိုက်​ဖြစ်​ပါ​ဘူး ကိုDBA ကြီး ဟီး ဟီး တရား​စခန်း​လာ​ဝင်​တဲ့ ယော​ဂီ​က ကင်​မ​ရာ​ကြီး တစ်​ကား⁠ကား​နဲ့ ဆို ဘုန်းကြီး ပြော​ခံ​ထိ​မှာ သေချာ​တယ်… ဒါ​ကြောင့် အိမ်​မှာ ထားခဲ့​လိုက်​တယ် Like or Dislike:00	LeaveaReply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Captcha *=4+ 8 Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email.	Recent Posts